Semalt: कसरी इन्टरनेट विज्ञापन ट्र्याकिंग रोक्न?
व्यक्तिहरूले इन्टरनेटमा गर्ने सबै कुरा सजीलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ, र अनलाइन कम्पनीहरूले दैनिक आधारमा उनीहरूको ग्राहकहरूको बारेमा ठूलो मात्रामा डाटा स collect्कलन गर्दछ। तिनीहरू यो डाटा बिभिन्न उत्पादनहरू बेच्न र सही दर्शकहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग गर्दछन्। तपाईले वर्ल्ड वाइड वेबमा सर्फ गर्नुभयो भने यो व्यक्तिगत र लक्षित मार्केटिंग सन्देशहरू पठाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। यो भन्न सुरक्षित छ कि अनलाइन ट्र्याकिले हालका महिनाहरूमा धेरै गोपनीयता चासोहरू उत्पन्न गरेको छ।
हामी सबै कम्पनीहरूको डाटा पहुँच गर्दैनौं, तर तिनीहरू दिनदिनै हाम्रो जानकारी स collect्कलन गर्छन्। हामीलाई थाहा छैन उनीहरूको सेवाहरू कसरी प्रयोग गर्ने र कस्तो प्रकारका उत्पादनहरू प्रदान गर्दछन्।
इमान कोनोवालोभ , Semalt का एक शीर्ष पेशेवर, आश्वासन दिन्छ कि धेरै अनलाइन ट्र्याकिंग प्रणाली हानिविहीन छ र ईन्टरनेटमा चोरी र साइबर अपराध पहिचान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कसरी इन्टरनेट विज्ञापन ट्र्याकिंग काम गर्दछ?
कुकीज र अनलाइन गोपनीयता इन्टरनेट मा दुई प्रमुख चिन्ता हो। वेबसाइटहरूमा देखा पर्ने विज्ञापनहरूका लागि, एक मेशिन प्रयोगकर्ताहरूले क्लिक गरेको सटीक चीजहरू रेकर्ड गर्न जिम्मेवार हुन्छ, भूतलाई स्क्रोल गर्नुहोस् र यसमा रोल गर्नुहोस्। यो विज्ञापन ट्र्याकिंग प्रणाली को रूप मा भनिन्छ र विज्ञापन को प्रभावकारिता र उपयोगिता मूल्यांकन गर्न डिजाइन गरिएको छ। हालका महिनाहरूमा, यस प्रणालीले ठूलो सफलता हासिल गरेको छ, र अधिक र अधिक ब्रान्डहरू यसमा आकर्षित भइरहेका छन्।
तेस्रो-पार्टी कुकीहरू विज्ञापन ट्र्याकिंग प्रणालीको एक ठूलो अंश साथ गर्दछ। सानो फाईलहरू वेब ब्राउजरहरूमा भण्डारहरू हुन् जुन वेबसाइटहरूलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंले सर्फ गर्नुभयो। तपाईको जानकारी र यूआरएलहरू दैनिक आधारमा भण्डार गरिएको छ, र कुकीहरू एम्बेडेड ग्राफिक्स, अनलाइन विज्ञापन, र तपाइँ भ्रमण गर्न मन पराउने साइटहरूबाट आएका छन्।
तपाइँले दिमागमा राख्नु पर्छ कि कुकीहरू दुवै असल र खराब हुन्। उनीहरू बिना, विभिन्न वेबसाइटहरू जस्तै फेसबुक, अमेजन, eBay, र अन्य सही पहुँच गर्न सकिदैन। कुकीहरूले तपाइँको सर्भरको बारेमा उपयोगी जानकारी भण्डारण गर्दछ, साइटहरूलाई उनीहरूको सेवाहरू सुधार गर्न मद्दत गर्दछ र तपाइँलाई पहिले भन्दा अझ बढी निजीकृत र अनुभव प्रदान गर्दछ।
केही कुकीहरू, यद्यपि विज्ञापनदाताहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन डिजाइन गरिएको छ। तिनीहरू यी कुकीजहरूको माध्यमबाट स collected्कलन गरिएको जानकारीमा निर्भर छन्। उदाहरण को लागी, गुगलको डबल क्लिकले तपाईको मेट्रिक्स र प्रोफाइल रेकर्ड गर्दछ कि कुन विज्ञापनदाताहरु र विज्ञापनहरु तपाईको साइटहरुलाई अधिक सूट गर्दछ।
इन्टर्नेट विज्ञापन ट्र्याकिंग रोक्नुहोस्
वर्ल्ड वाइड वेबको प्रकृति दिईएको छ, यो कुकीहरू अक्षम गर्न व्यावहारिक नहुन सक्छ। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो समय खपत गर्ने र सबैभन्दा चिढचिढ्ने प्रक्रियाहरू मध्ये एक हो। तपाइँ अझै पनी विज्ञापन कुकिहरु लाई तपाइँको वेब ब्राउजरबाट अक्षम गरी रोक्न सक्नुहुन्छ।
संघीय व्यापार आयोग र बाँकी सरकारी निकायले केहि नियम र नियम बनाएको छ। दुबै याहू र गुगलले भर्खर अप्ट आउट बटन र गोपनीयता व्यवस्थापन कार्य आफ्नो प्रयोगकर्ताहरूको खातामा थप्यो।
यो विकल्प सक्षम गर्नका लागि तपाईले आफ्नो जीमेल वा याहू खातामा जानुपर्नेछ र गुगलको प्राइभेसी सेन्टर वा याहूको विज्ञापन रूचि प्रबन्धक जाँच गर्नुपर्नेछ। यहाँ, तपाईं केहि अरू बटनहरूको साथ अप्ट आउट बटन फेला पार्नुहुनेछ। तपाईं यो बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकीसँग केही नगर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग केही कन्फ्युजनहरू छन् भने तपाईंले दुई वेबसाइटहरूको मद्दत पृष्ठहरू जाँच गर्नुपर्नेछ।
तपाईंको ब्राउजर सेटिंग्स समायोजित गर्नुहोस्
बिभिन्न ब्राउजरहरूको भित्र निर्मित सेटिंग्स हुन्छन् विशिष्ट कुकीहरू र बोटनेटहरू तपाईंको प्रणालीमा स्थापना हुनबाट रोक्नको लागि। यदि तपाईं कुकिज सक्षम गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईंले आफ्नो ब्राउजर सेटिंग्स समायोजित गर्नुपर्दछ र विज्ञापन ट्र्याकिंग प्रणालीहरू रोक्नु पर्छ तपाईंले इन्टरनेटमा जे पनि गर्नुभयो रेकर्ड गर्नबाट। तपाईले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध डाटा जति सक्दो चाँडो हटाउनु पर्छ। प्रतिष्ठा डिफेन्डरले आफ्ना ग्राहकहरूलाई उन्नत र आधारभूत गोपनीयता सुरक्षा सेवाहरू प्रदान गर्दछ र वेबमास्टर्स र कम्पनीहरूको लागि इन्टरनेटमा तपाईंको जानकारी फेला पार्न असम्भव छ भनेर निश्चित गर्दछ।